स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त – Everest Dainik – News from Nepal
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त
२०७६, ८ फाल्गुन बिहीबार
काठमाडौंः स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशकमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै श्रेष्ठलाई यो जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक रहेका डा. रोशन पोखरेललाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाको जिम्मेवारी डा. गुणराज लोहनीले पाएका छन् । यसअघि डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयमा नीति योजना महाशाखा सम्हाल्दै आएका थिए । डा. देवकोटालाई भने स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारी डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ । साविकका अस्पताल निर्देशक डा आरपी बिच्चालाई भने सरुवा गरिएको छैन । उनलाई हाल यही अस्पतालमै राखिएको छ ।
यसै क्रममा डा. सन्तोष पौडेल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएका छन् । टेकुमा रहेको शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशक रहेका डा बासुदेव पाण्डेलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यहाँका निर्देशक डा विवेक कुमार लाललाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशन डा. सागरराज भण्डारीलाई टेकु अस्पतालको निर्देशक बनाइएको छ ।
यस्तै डा. रविन खड्कालाई वीर अस्पतालमा ल्याइएको छ । कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी डा. चुमनलाल दाशलाई तथा भेरी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी डा. प्रकाश थापालाई दिइएको छ ।
ट्याग्स: महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभाग